Hay’adda PDRC: Dadka Puntland waxay diyaar u yihiin nidaamka Xisbiyadda Badan – Idil News
Hay’adda PDRC: Dadka Puntland waxay diyaar u yihiin nidaamka Xisbiyadda Badan
Hay’adda Hormarinta iyo Cilmi-baarista Puntland ee PDRC ayaa diraasad ay soo bandhigtay ku sheegtya in hirgelinta Nidaamka xisbiyada badan ee Puntland ay ku xirantahay tayada iyo xalaalnimada guddiga doorashooyinka Puntland ee la soo magaabi doono kadib markii guddigii hore is wada casilay.
Hay’adda ayaa diraasaddeeda ku sheegtay in ay adagtahay bulsho ku dhisan qabiil in laga dhex sameeyi xisbiyo siyaasadeed oo leh mabaadii’ cad-cad
Halkaan hoose ka akhriso diraasadda oo dhan
Hirgelinta nidaamka xisbiyada badan waxay ku xiran tahay “Tayada” iyo “Xalaalnimada” Guddiga Doorashooyinka ku-meel-gaadhka ah ee Puntland ee laga dhawrayo hay’adaha fulinta iyo xeerdejinta. Sawirka uu yeesho Guddiga cusubi ayuu nidaamkuna yeelan doona.
Daraasadda la sameeyey waxa ay asteysay in
ay jiraan fursado wax ku biirin kara dib-u-soo
celinta iyo ka mira-dhalinta geeddi-socodka
Ka go’naanshaha Guud ee Dawladda (General government commitment)
Puntland Development Research Center-PDRC dadkii ku waraystay daraasadda waxa ay ku baraarugsanaayeen sida ay u adag tahay in bulsho ku dhisan qabiil laga dhex sameeyo xisbiyo siyaasadeed oo dhab ah oo leh mabaadii’ cadcad.
Dadka waxa la su’aalay, “maxay yihiin fursadaha jira ee dib loogu billaabi karo geeddi-socodka dimuqraaddiyadda?” Guud ahaan, iyada oo maamul cusub talada hayo, ka qayb-galayaashu waxa ay muujiyeen kalsooni in ay ku qabaan dib-u-bilaabidda hannaanka dimuqraaddiyadda:
“Maamulka hadda jirta waa in uu saxo khaladkii uu galay maamulkii ka horeeyey iyo in uu ka faa’iidaysto wakhtiga uu haysto” – Xawo Cabdi Jamac (Qurba-joog Gaalkcayo).
“Maamulka cusub waxa uu haystaa casharro muhiim ah oo laga bartay khibraddii hore, wakhti ku filan iyo bulshada oo diyaar u ah dib-u-bilaabidda hannaanka dimuqraaddiyadda” – Axmed Khaliif Cabdulle (Galdogob).
Dadkii ka qayb-galey daraasadda waxa ay dareensanaayeen in maamulka cusub ballan-qaaday in uu dardar-gesho, dhamaystiri doonana, geeddi-socodka dimuqraaddiyadda. Sida ay qiyaasayeen, khibrad dhab ah iyo waaya-aragnimo ayaa laga dhaxlay doorashooyinkii la joojiyey 2013-kii, taas oo saldhig u noqon karta go’aannada dambe ee dawladda.
Dadka ka qayb-galey daraasadda, iyo bulshada guud ahaan, aad ayey u taageersan yihiin dimuqraaddiyadda, ayaga oo aqbalsan fikradaha iyo mabaadii’da dimuqraaddiyadda, haddiiba ay waafaqsan tahay diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee suubban.
Sannadihii u dambeeyey, wacyiga bulshada dhanka dimuqraaddiyaddu kor ayuu u kacay. Wakhtiga hadda ah, dadku si weyn ayuu u danaynayaa geeddi-socodka dimuqraaddiyadda iyo fikradaha iyo mabaadii’da dimuqraaddiyadda.
“Waxa aan xasuustaa wakhti yar ka hor in dimuqraaddiyadda oo laga hadlaa ay ka dhignayd in diinta la caayey. Haddana
waa hab siyaasadeedka aan hiigsaneyno.”
– Cumar Aadan Cabdulle (Xubin golaha degaanka Galdogob)
Isbeddelka ku dhacay aragtida dadka waxa uu ka dhashay olole ay jileyaal kala duwan ku qaadeen kobcinta wacyiga ummadda xilligii ay soo dhawaadeen doorashooyinkii la isku dayey in la qabto; jileyaashaas oo ay ka mid ahaayeen ururrada bulshada rayidka ah, dawladda, ururrada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba.